ग्लोबल वार्मिंग एलर्जीको साथ स्काईरोकेट | नेटवर्क मौसम विज्ञान
ग्लोबल वार्मिंगको साथ, एलर्जीको स्काईरोकेट
हालका वर्षहरुमा हामी बढ्दो लामो र तातो गर्मीहरु को साक्षी छौं। कहिलेकाँही हामीसँग मौसम पनि मिल्दोजुल्दो छ भन्ने भावना पनि हुन सक्छ जुन विशेष गरी भूमध्य क्षेत्रमा केही समय पहिले भेरोजो शब्द बनिएको थियो। यो परिवर्तन निश्चित रूपमा ती अपील गर्दछ जो हिउँद मा सबै खुशी छैन, तर यसले एलर्जी पीडितहरूलाई धेरै असुविधा उत्पन्न गर्दैछ।
बोटबिरुवाहरू, त्यस्तो राम्रो मौसम र अधिक हप्ताहरूको लागि, फाइदा लिन्छन् र फल फल्छन्। त्यसो गर्दा, हावाले यससँग परागको बढ्दो मात्रा बोक्दछ। केहि परागहरू, जति हामी यसलाई टाढा राख्न चाहन्छौं, मानव नाक भित्र समाप्त हुन्छन्। र ती मध्ये केही धेरै संवेदनशील छन्। यी सबैको बारेमा दुखद कुरा के हो भने ग्लोबल वार्मिंगको कारण, एलर्जी मात्र स्काइरोकेट हुनेछ.
यद्यपि, अवश्य पनि, तापमानमा भएको वृद्धिको जिम्मेवार मात्र छैन। खडेरी र प्रदूषण समस्याको एक प्रमुख अंश हो। अनुसार नैतिक एन्जिल, स्पेनिश समाजको एलर्जीविज्ञान र क्लिनिकल इम्युनोलजी (समुद्री) को एरोबियोलोजी कमेटीका अध्यक्ष र टोलेडो अस्पताल कम्प्लेक्सको एलर्जी विज्ञ, »त्यहाँ वातावरणीय प्रदूषण र श्वासप्रश्वासको एलर्जी को मामिलामा वृद्धि बीच सीधा सम्बन्ध छ। डिजल ईन्जिन दहन र हीटिंगमा हटाइएको पार्टिकुलेट्सले बिरूवाहरूको लागि प्रतिकूल वातावरण सिर्जना गर्दछ। आफ्नो रक्षा गर्न, तिनीहरू प्रोटीन उत्पादन गर्दछ जसले परागहरूलाई अधिक आक्रामक बनाउँछ।
उच्च तापक्रमले परागकण अवधिलाई लामो पार्दछ, त्यसैले राइनाइटिस अब मौसमी हुँदैन। तर अझै अझै छ: किनभने यो कम र कम वर्षा भएको छ, कमजोर बोट प्रजातिहरू हराउँदैछन्। त्यसो गर्दा, सबैभन्दा प्रतिरोधक व्यक्तिहरू जसले पनि सबैभन्दा बढी एलर्जीको कारण निम्त्याउँछ, जस्तै सल्सोला, जुन गटर र खेतजस्ता प्रायजसो जडिबुटी हो, तिनीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्दैछ।
के यो एलर्जीमा बढेको प्रभावलाई कम गर्न केहि गर्न सकिन्छ? अवश्य: एलर्जी रहित रूख रोप्नुहोस्, ट्राफिक प्रतिबन्ध गर्नुहोस् र प्रदूषण नगर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » ग्लोबल वार्मिंगको साथ, एलर्जीको स्काईरोकेट
चिसोको भावना किन कम हुँदैछ?
ESA मंगलवार उपनिवेशको लागि लन्जारोटमा ट्रेन गर्नेछ